Diary hafa - Ny Martsa Manerantany
Home » Marches hafa
Avy amin'ny 16 nanomboka tamin'ny Septambra ka hatramin'ny 13 tamin'ny Oktobra
La Ny Diabe Amerikana Atsimo ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahazakana (MS) dia nitsidika mihoatra noho 11.500 kilometatra anatin'ny andro 28 isaky ny Venezoela, Kolombia, Ekoatera, Peru, Bolivia, Suriname, Brezila, Arzantina y Chile.
Ny hetsika dia nampirisihan'ireo vehivavy mpikatroka ao amin'ny fikambanana "Tontolo tsy misy ady sy herisetra"Ekoatora toko izay nandray anjara tamin'ny Diabe Amerikana Afovoan'ny 2017 ho mpanaramaso iraisam-pirenena.
Io vondrona madinika io dia nampifandray tamin'ireo mpikatroka avy amin'ny tanàna hafa Bogotá, Lima, Santiago, siramamy, Cordova, Sao Paulo ary vitsy kely ny tambajotra noforonina, tsy misy olana, ary ny dia, ny fisehoan-javatra, ny resadresaka ary ny vondrona mpandray anjara ao anatin'izany. ekipa fototra izay hanao ny diany rehetra. Rehefa avy nandray anjara bebe kokoa ireo humanists mpikatroka, mpiaro ny tontolo iainana, pacifists sy tsy misy herisetra ary koa ny fikambanana, oniversite, oniversite, kaominina sy ny vondrona ny firenena samy hafa, izay azo atao miaraka ny diabe nataony.
Mpikatroka enimpolo avy amin'ny Pacific Corridor, anisan'ireo izay nanao sarimihetsika Kolombiana efatra izay nanao ny dia manontolo, nifanerasera tamin'i Santiago de Chile niaraka tamin'ireo izay avy Atlantic Corridor tamin'ny inona ny dingana farany tamin'ny volana martsa izay nandalo toerana telo amby efapolo, teo anelanelan'ny tanàna sy ny tanàna, toerana nahitana hetsika maro nampiroborobo ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fisian'ny asa.
Ny fampahafantarana feno dia azo jerena ao amin'ny WEB
Azo jerena na navoaka maimaim-poana ny bokin'ny Diabe Amerikana Atsimo.
Avy amin'ny 10 nanomboka tamin'ny Septambra ka hatramin'ny 16 tamin'ny Septambra
Ireo mpandray anjara ao amin'ny 1ª Diabe Amerikana Afovoany ho an'ny Fandriam-pahalemana sy ny tsy Fahampiana (MC) reNihazakazaka mihoatra ny 3.400 kilometatra izy ireo tamin'ny andro 7.
Dia maro ny diabe, zava-nitranga, fifanakalozan-kevitra, hetsika ara-kolotsaina sy ny fety izay natao tamin'ny 10 toerana, anisan'izany ny tanàna sy kaominina in Honduras (Peña Blanca, San Pedro Sula sy San Lorenzo), Guatemala (City sy Mixco), El Salvador (Sonsonate, San Salvador sy San Miguel), Nicaragua (Borders), Panama sy Costa Rica (San José sy Heredia).
Ny diabe dia vondrona mpikatroka 74, tanora mpianatra maherin'ny ankamaroany, ary koa ireo olon-dehibe, anisan'izany ny ankizy sasany. Nandritra ny fizahan-tany dia niaraka tamin'ireo mpikatroka Ekoatoriana izy ireo ho mpanaramaso iraisam-pirenena.
Nisy delegasiona avy any Costa Ricans nandray ny sisintanin'ny Peñas Blancas to the MC avy lavitra Nicaragua. Ora vitsy taty aoriana ny 1ª MC noho ny tsy fisian'ny herisetra sy ny fandriam-pahalemana tonga tao an-drenivohitra, San José Ao amin'ny Campus Omar Dengo de National University of Costa Rica (UNA), dia noraisin'ireo mpianatra an-jatony, mpikatroka ary manam-pahefana manam-pahaizana Rector Doctor Alberto Salom amin'ny loha.
Nisokatra ny fanombohany Foro ary ny University Days "Fahitana tsy misy herisetra sy fandriampahalemana" Tsy natao nandritra ny andro manaraka 2, 14 15 sy 2017 Septambra. Izany dia ilay fahatanterahan 'ny ezaka lehibe ny vondrona izay tonga efa ho reraka, indrindra fa ny zava-tsarotra nihaona tamin'ny fomba amam-panao sy ny niampita sisin-tany, miaraka amin'ny fanitsiana sy ny lava tsy misy farany miandry ny fotoana, izay matetika no niandohan'ny voalamina ho tonga tara ny asa. Nisy nanamafy fa misy fitondram-panjakana any amin'ny faritra hanakantsakana ny hetsika maimaim-poana ny olona.
Nandrosoan'ny fikambanana ilay hetsika "Tany tsy misy ady ary tsy misy herisetra" Central America Chapter ary nanisa ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite maro, andrim-panjakana ary ny ivon-toerana.
Azo jerena na navoaka maimaim-poana ny bokin'ny Diaben'i Amerika Afovoany.
1ª 2009 martsa manerantany
Avy amin'ny 2 ny volana Oktobra avy amin'ny 2009 ka hatramin'ny 2 ny volana Janoary amin'ny 2010
Azo jerena ety anaty aterineto ny bokin'ny Diaben'ny 1ª